ICT shows များနှင့် ပတ်သတ်ရ် - MYSTERY ZILLION
ICT shows များနှင့် ပတ်သတ်ရ်
November 2009 edited December 2010 in Computer Humor
MZ မှာ အရင်လို ပျော်စရာ ဆောင်းပါလေးတွေ ရှားပါလာတာကြောင့်အနော်ငဇူး
အရင်နောင်တော်ကြီးများဖြစ်ကြသော ကိုပီဇီ။ကိုရသ။ကိုစိုင်းတို ့ကို အားကျသောကြောင့်
ဒီ ပိုစ်လေးကို တင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ICT show တွေက တော ့နေရာတစ်ကာ မုှိလိုပေါ်ပေါက်လာပြန် ပဟေ ့။
အဲဒါတွေ နဲ ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိရသလောက်လေးတွေ တင်ပြလိုပါတယ်။
တစ်နေ ့ဂျာ အနော် ဆရာက အနော ့ကို မေးတယ်вЂ¦
လက်ဗွေနဲ ့ဖွင့်ရတဲ ့လက်တောပ် ့ရှိလားတဲ ့
ကျွန်တော်က ပြောလိုက်တယ် မရှိဖူး လို ့..အဟီးвЂ¦
နောက်တော ့ကိုစိုင်းတို ့ကို သွားမေးမိတော ့မှ..အဲဒီလက်တော ့ပ်ရှိမှန်း သိရတယ်
နောက်ပြီး ကိုယ်တိုင် Wedsite တွေ ကို လှန်လျှောကြည် ့ရှု ့လိုက်တော ့မှ
eyetest စစ်ပြီးမှ ဖွင့်ပေးတဲ ့လက်တောပ် ့တောင် ပေါ်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါတယ်။
အဲဒီတော ့မှ ဂျာ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့သွားပြန်ပြောရတယ်။ ဟိုက ဆဲရော ဟင် ့။
အဲဒီမှာ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက ကျွန်တော်ဘာများမှားလဲ ပေါ ့နော်вЂ¦။
အဲဒီအခါမှာ ICT ရှိုး အဲဒီလို နည်းပညာပြပွဲ တွေကို ကျွန်တော်မသွားခဲ ့ဖူး..
ဘယ်တော ့မှ မသွားခဲ ့တာ။ပိုက်ဆံမရှိပဲနဲ ့လည်း မ၀ယ်ချင်တာပါတာပေါ ့နော်။
မသွားတော့အသစ်အဆန်းတွေကို ကျွန်တော် မသိဖူး။ မသိတဲ ့အတွတ် အသုံးမချတတ်ဖူး
အဲဒီလိုပေါ ့ဂျာвЂ¦ငတုံးကြီးကို ဖြစ်ရော။
ဒါက တော့ICT ရှိုးမသွားခဲ ့တဲ ့ကျွန်တော်ရဲ ့ရလဒ်ပါ။
ကျွန်တော်တော်တော်နောင်တ ရသွားခဲ ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ICT ရှိုးနဲ ့ပတ်သတ်ပြီး
ကောင်းသည်။ မကောင်းသည်လေးများကို ပြောကြားပေးစေလို ပါတယ်။
အဲဒီတော့ICT ရှိုးနဲ ့ပတ်သတ်ပြီး ကောင်းကျိုးများ မကောင်းကျိုးများကို
အောက်မှာ ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးကြပါလို့ပြောကြားပါရစေခင်ဗျား။
အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့MRMZ 75 အသံလွှင့်ငှာနမှ ICT show ကို သွားခဲ ့တဲ ့
MZ မှ ညီအကို များကို အင်တာဗျူးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုမြန်မာမန်းကတော့ICT show ပွဲတွင် အဲယားကွန်းဖွင့်ရန် မီးမလာ
သောကြောင် ့ချွေးတစ်လုံးလုံးနဲ့ကြည် ့ရှုခဲ ့ရကြောင်းဆိုပါတယ်။
မချောကလက်ကတော ့вЂ¦.မ၀ယ်နိုင်ပေ ့မယ် ့လည်း ..
သွားငမ်းတာဖြစ်တာပါတယ်တဲ ့။ရည်ရွှယ်ချက်ကောင်းပါတယ်။ ၀ယ်ဖို ့က အထိက မဟုတ်ပါဖူး။ မြင်ဖူးရင် ကျေနပ်သူပါ။ဟိ
ကိုကို၀င်းကတော့ဟိုဟာလေးမိုက်တယ်လို ့ပြောပါတယ်။ ဘယ်ဟာလဲ တော ့သူသာသိပါမည်။ဟိ
ကိုကြည် ့ရှောင်ဆိုတဲ ့ညီလေးကတော့ကောင်းပါတယ်။ချောပါတယ်လို ့ပြော ကြားသွားပါတယ်။ထပ်မံပြောကြားသွားတာကတော ့
MISS IT ကို ကြိုရွှေးတာ သူမကြိုက်ဖူးလို ့ပြောပါတယ်။ ညီလေးစိတ်လျှော ့နော်။ဟိ
သူအပြင်မှာ ဂိမ်းလောင်းတာနဲ ့ပြီးနေလို့သေသေချာချာတောင်မကြည် ့လိုက်ရဖူးဆိုပဲခင်ဗျ။
ဆက်လက်ပြီး ICT ရှိုးနဲ ပတ်သတ်တာလေး တွေကို ဆွေးနွေးပေးပါလို ့အနူးအညွတ် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။မမေးမြန်းလိုက်ရတဲ ့သူတွေလည်း စိတ်မဆိုးနဲ ့နော်။
စိတ်လျှော့ထားပါတယ် ကိုဇူးရေ နောက်နှစ်တော့ ဟဲ ဟဲ...........
ဟိဟိ ကြုံတုန်းပြောလိုက်ဦးမယ် ဟိဟိ မောင်ပြုံးပြောသလိုပေါ့
အကို Printer လေးတွေချောရဲ့လားတဲ့ ခွိခွိ..မောင်ပြုံး နာပြော၀ူးနော်:D:D
Myanmar ICT Show ဆိုတော့လည်း ဗျာ ကျနော်တို့ လို့ သိချင်တတ်ချင်တဲ့ လူတွေ သွားကြည့်တာပေါ့ နော်.... ဒါပေမဲ့ ဗျာ ... မြန်မာနိုင်ငံမှာက ထောက်ပံမှု နည်းသေးတော့လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ် ... ကောင်းပါတယ် ဒီထက် မက စျေးနှုန်းများလည်း လျှော့ ချ ရောင်းနိုင်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းပေးပါတယ်... ချွေးမထွက်အောင်လည်း ထောက်ပံနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်.... ဟီးဟီး... စေတနာပါ .. :5::5::5::5:
အဲဒီမှာကိုယ်ကလည်း ၀ယ်ဖို ့မဟုတ်ပါဘူး ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ပါးစပ်ဆတ်ဆော့
လိုက်တာ ဦးလေး ဒီစက်က wifi ပါလားဆိုပြီးမေးလိုက်တာ ဟိုကလည်း wifi မပါဘူးတဲ့
အဲဒီစက်မှာ wifi မီးလေးကလင်းနေတာ ပြူးကနဲပဲ အဲဒါကိုမပါဘူးဆိုတော့ :O:O
အဲဒီမှာ ဘာပြောလို ့ပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး နောက်မှ အော် တို ့ဆီကလူတွေက
အလို show တွေသာမှိုလိုပေါက်နေတာပါ....တစ်နှစ်လာလဲ..ဒါဘဲ...နောက်တစ်နှစ်လာလဲဒါဘဲ...ဘာမှမပြောင်းလဲဘူး
IT Show ဆိုတာက နာမည်ပြောင်းထားတာပဲလေ တစ်ကယ်တော့ စျေးရောင်းပွဲပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ ကောင်းတော့လည်းကောင်းပါတယ် ကိုယ်တိုင်မဆင်နိုင်တဲ့ ပစ္စည်တွေနဲ့ သူများဆင်ထားတာတော့ အနည်းဆုံးတွေ့ရသေးတာပေါ့ ဆိုင်ပေါင်းစုံစုပြီး ရောင်းကြတော့ စျေးလည်းမဆိုးပါဘူး။ ကျောင်းသားဘဝကတော့ အရမ်းပျော်တာပဲ ဒို့မြို့က ကွန်ပျူတာရောင်းပွဲကတော့ အမြဲတမ်း မြို့တော်ခန်းမမှာလုပ်တာ များတာပါပဲ။ ဆိုင်တစ်ကာလှည့် ကြော်ငြာစာရွက်ယူ မော်ဒယ် (လူမော်ဒယ် မဟုတ်ဟု ယူဆပါ ) များကို တစ်အံ့တစ်သြငေးပေါ့။ နောက်ဆုံးကြုံလိုက်တဲ့ ကွန်ပျူတာအရောင်းပွဲကတော့ မြို့ထဲမှာ မြို့တော်ခန်းမဆိုတော့ ပူလို့ထင်ပါတယ် အေးအေးလူလူ နေရာ ရွှေ့လုပ်သဗျာ။ တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ထဲမှာလည်း ပန်းပြပွဲနဲ့ကလည်း တိုက်ဆိုင်ရှိပေါ့။ ကားများလည်းအထူးအစီအစဉ်အဖြစ် ဆွဲပေးတယ်ဗျ စျေးကလည်းချိုတယ် ကွန်ပျူတာ အရောင်းပွဲဆို ၃၀၀ ပန်းပြပွဲအထိဆို ၅၀၀ လားမသိဘူး သေတောင် မသေချာတော့ဘူး။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ကွန်ပျူတာပြပွဲကားဂိတ်လူစည်တာ အဲ့ဒီ့တစ်နှစ်ပဲရှိသဗျ ကြိတ်ကြိတ်တိုးပဲ ခက်သွားတာက တစ်ခုပဲရှိတယ် လမ်းတစ်ဝက်ကို ၃၀၀ ပေးပြီးဆင်းရမှာ မတန်လို့ထင်ပါတယ် အားလုံးက ၅၀၀ တန်ပဲပေးစီးလိုက်ကြတာ စည်လိုက်တဲ့ ပန်းပြပွဲဗျား ။ ကျောင်းလည်း ကျောင်းကားနဲ့ အလကားလိုက်ပို့တယ် ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီ့ရက်ကကျောင်းရောက်မိလို့ ဆူပါဗိုက်ဇာက နင်လည်းလာခဲ့လုပ်နေလို့ ပန်းပြပွဲအထိရောက်မှာလားမေးတော့ အဲဒါမပါဘူးတဲ့ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်မအားဘူး တီချယ်ဆိုပြီး နောက်နေ့ ၅၀၀ တန်ကားနဲ့သွားလိုက်သေးတာကလား။ နောက်မကြာပါဘူး ဘာဖြစ်တယ်မသိဘူး ထုံးစံအတိုင်း မြို့တော်ခန်းမထဲပဲ ပြန်ပြီးနောက်တစ်ခေါက် ပြန်လုပ်တယ် တစ်နှစ်ကို နှစ်ခါလုပ်တာ အဲဒီတစ်ခါပဲ မှီလိုက်တယ် အခုတော့ မဆက်စပ်မလို့ နောက်နှစ်တွေ ဘယ်လုပ်သလဲ ဘယ်မော်ဒယ်တွေ လာသလဲတော့ မသိတော့ဘူး။
IT Show တွေ က မန်းလေး မှာဆို ဆိုင်ကယ် / ကား အပ် ခ တအားစျေးမြောက်တယ်
လာကြည့်ရှု တဲ ့သူတွေ ကြိုက်လား မသိ မကြိုက်လား မသိ ..လက်ကမ်း စာရွက် တွေ ကုန်ပြီးတာဘဲ
ဇွတ်ရွတ် ပေးတာ တွေ လဲ မကောင်းဘူးဗျ....ဒီကြားထဲ Metal detector ကြီး နဲ ့ဟိုဒီ စစ်ခံရတေး..
မကောင်းဆုံး က ပြပွဲ မှာ CD ခွေ ၀ယ်တာပါဘဲ.. ဟင့်..မန်းမှာ ဆို ခုနတိုင်း ခံစားရတယ်..ကာဗာ
တခြား အထဲက ခွေ တခြား.. အော်.. ဖြစ်တတ်ပါတယ်လေ.........
ဆိုင်ကယ်အပ်ခကတော့ ခံရပါများလို့ရိုးနေပြီ ဘယ်ရမလဲ မြို့တော်ခန်းမ တစ်လမ်းကျော်မှာ သူငယ်ချင်းအိမ်ရှိတယ် အဲဒီ့မှာ ဆိုင်ကယ်ထားပြီး လမ်းလျောက်လာတာ။ ခင်ဗျားနဲ့ခက်တာ ကိုမင်းလွင်ရယ် လွယ်တာကိုခက်အောင်လုပ်နေတယ် ချစ်ချစ် မှာဆိုင်ကယ်ကိုရပ် လက်ဘက်ရည်သောက် ပြီးရင်ဆိုင်ကယ်မယူပဲ စည်ပင်ရုံးထဲကနေ မြို့တော်ခန်းမကိုဝင် ပြီးမှ ချစ်ချစ်ကိုပြန်ပြီးဆိုင်ကယ်ယူပေါ့ :d အခုဘယ်မှာလုပ်သလဲဗျ မိုင် ၃၀ လောက်ဝေးတဲ့နေရာ သွားပြီး လုပ်တုံးပဲလား အဆက်မစပ်မရှိတာကြာပေါ့။ :d
ချစ်ချစ် က ပြပွဲ ရက် ဆို လွှတ်စည်တယ်..
စျေး နဲ ပိုကြီး လာသလိုဘဲ.. အနော်ကတော့ကြံခိုင်ရေး အသင်းရုံး ထဲ ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး သွား
မန်းလေး မှာ အိုင်စီတီ ရှိုးပွဲ တွေ ကျဲတောက် နေတော ့ပြပွဲတိုင်း လူစည် နေကျလေ..
ဒါနဲ့အခု ထက် ထိ မန်းမှ အားနည်း နေသေးတာ ကတော့Linux ဘဲ..
သင်တန်း ကြေးတွေ လဲ ခေါင်ခိုက်တယ်..လွယ်ဘူး :14:
ကိုလူပျို သိတဲ ့နေရာလေး ရှိရင် ညွန်ပါအုံး Linux အတွက် ပေါ.. နောက်လူတွေ ဆရာ ကောင်း နဲ ့
တွေ ့အောင် လမ်းညွှန်ပေးရအောင် လို့programming ပိုင်းလဲ ဆရာ တွေ ရှိရင် လမ်းညွန်ပါအုံး
မန်းလေး က မိ်တ်ဆွေ ဘော်ဘော် တွေ ကို လက်တို ့ချင်လို ့ပါ..
ချစ်ချစ် က ပြပွဲ ရက် ဆို လွှတ်စည်တယ်.. စျေး နဲ ပိုကြီး လာသလိုဘဲ.. အနော်ကတော့ကြံခိုင်ရေး အသင်းရုံး ထဲ ဆိုင်ကယ် / စက်ဘီး သွား
Linux များဘာခက်လို့တုံး စမ်းသုံးကြည့်ပေါ့ Install လုပ်တာလား Next, Forward, Ok, Cancel, Finish နှိပ်တတ်ရင် ရပြီလေ ရှေးယခင်လို ရှုပ်ရှုပ်ပွေပွေဟုတ်ပါဘူးလေ။ GUI လေးနဲ့ဟာစမ်းသုံးတာ ဘာခက်မှတ်လို့ Ok နဲ့ Cancel ဆို ဘာနှိပ်ရမှန်းမသိရင် တစ်ခုစီစမ်းနှိပ်ကြည့် ဘာဖြစ်လာလဲမှတ်ထား နောက်တစ်ခါမှားမနှိပ်နဲ့ပေါ့။ Command တွေများ ဘာသုံးရမှန် မသိဘူးမဟုတ်လား man ကိုခေါ်ကြည့်။ Error တွေတက်သလား မပူနဲ့ Error စာသားအတိုင်း တစ်လုံးမကျန်သာ Google ထဲရိုက်ထည့်လိုက် ထွက်မလာမှာမပူနဲ့ ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်း ကံထူးပြီး Error တက်တာမှ မဟုတ်တာပဲ အဖော်တွေရှိတယ်ရယ်။ ဒို့ဖြင့်ဒီလိုပဲသင်လာတာပဲဟာ မပူနဲ့အင်မတန် အတတ်မြန်တယ်ရယ် လုပ်ချင်စိတ်ရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ :P
programming က အစကတော့ သင်တန်းတွေတက်ဖူးပါတယ် အရင်က MCSD က Programming မှာ Desktop ရယ် Distributed ရယ် နှစ်ဘာသာဖြေရတယ်ဗျ အဲဒါကို Desktop စာအုပ်ကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖတ်ပြီး Distributed ကျတော့မှ ဆရာ့ကိုအတင်းအပူကပ်ပြီး အတန်းတစ်တန်းစာ လူစုပြီးသင်ခိုင်းတာ မကြာပါဘူး ၂ လလောက်လည်းနေရော ပြေးကြတာအကုန်ကုန်တာပဲ အမာခံ ၃ ယောက်ပဲကျန်လို့ အတန်းပိတ်လိုက်တာ ကျွန်တော့်ဆရာနောက်ဆုံး Programming သင်တန်းဖြစ်သွားတာပဲလေ။ နောက်တော့ မန္တလေး MICT စျေးအပေါ်မှာ စဆောက်တော့ တာဝန်ယူရတာရယ် အသင်းတာဝန်တွေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအတွက်ရယ်နဲ့ မအားတာနဲ့ ဆရာလည်းစာလုံးဝ မသင်တော့ပါဘူးဗျာ စာသင်တာကို သူများလွှဲလိုက်တော့တယ်။ နောက်ပြီးတော့ဆရာက စာသင်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး အတန်းထဲမှာက သူလည်းစပ်မိစပ်ရာ ပြောပြပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲစာဖတ်ရတာပါ သူ့ကိုမေးချင်တာမေးလို့ရတယ် စာဖတ်ချင်ရင် စာအုပ်ပေါင်းစုံ သူပေးလိမ့်မယ် ဒါပါပဲ လုပ်နိုင်တဲ့လူ အရမ်းတတ်သွားပေမယ့် မလုပ်နိုင်တဲ့လူ ဘာမှမတတ်ဘူးရယ်။ သူကလည်းပြောပြီးသား ငါသင်ထားလို့ တတ်တယ်လို့တော့ ငါအာမမခံဘူးတဲ့။ ဦးရဲနိုင် စာသင်သေးလား သေချာချင်ရင်တော့ သူ့သင်တန်းသာသွားမေးကြည့်တော့ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ မအားတာနဲ့ သူလုံးဝနီးနီး စာမသင်တော့ဘူးဗျ။
ဟီးးး အရင် က ကိုလူပျို ပြောသလို ဘဲ Teach Myself
တော ့ပစ် တောင် ချော်တော်တော် ဖြစ်နေဘီ..
ICT show အတွေ ့အကြုံနော်.ဟင်းဟင်း
Show ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောရရင် မြန်မာပြည် အနှံ့ မြို့ တကာ အနှ့ံ Show ပွဲ တွေ အများကြီးပဲ ကျနော် သိချင်တာက Electronic Show ပွဲ တွေနဲ့ ICT Show ပွဲတွေ ဘာကွာလဲမသိ ကွဲလွဲမယောင် နဲ့ တူသလိုလိုပဲ Electronic Show မှာ အိမ်သုံး၊ရုံးသုံး Electronic Device (ရေခဲ သေတာ၊ ပေါင်းအိုး စသည့် အိမ်သုံး နှင့် Printer Scanner တွေအပါအ၀င် ရုံးသုံး ) တွေ အဓိက ထားရမယ်ထင်တာပဲ ဒါပေမယ်. Electronic Show မှာ Computer တွေပဲ အဓိက ထားတော့ (Computer လည်း Electronic Device ပါပဲ) အိမ်သုံး Electronic Device အစုံစုံကို အဓိက လိုချင်တဲ့ ကျနော် အန်တီ က ဒီလိုပြောတယ်၊ """ ICT Show လည်း Computer အရောင်းပြပွဲ Electronic Show လည်း Computer အရောင်းပြပွဲ ပဲ အဲဒီနှစ်ခု ဘာကွာလဲတဲ့ """
Electronic Show ဆိုတာ လျှပ်စီးကြောင်းနဲ ့အသုံးပြုတဲ ့ရူပဗေဒ ပစ္စည်းအကုန်လုံးပါတယ်။ ကွန်ပြူတာလည်း ပါတယ်။ဘာလို ့လဲဆိုတော့သူကလည်း လျှပ်စစ်စီးကြောင်းရှိမှ ဖွင့်လို ့ရတဲ ့အမျိုးမို ့။
ဒါပေ ့မယ် ကွန်ပြူတာ ရှိုး ဟေ ့ဆိုရင်တော ့။ လျှပ်စစ်နဲ ့သက်ဆိုင်တဲ ့ဟာတွေ မပါတော ့ဘူး။ အနော်တို့သွားကြည် ့တုန်းကတော ့ရေခဲသေတ္တာတွေ ဘာတွေပါတယ်။ ဟီး
သြော်... နင်ကလည်း ဘာသိလို့ .. ခွိ
သူက အထဲက Wifi ကြီးကိုချွတ်ထားပီး .. Fate-Shade လေးနဲ့ Wifi မီးလေးဖွင့်ထားတာနေမှာပေါ့ ... ခွိ ... အေ၀းကကြည့် လူထင်ကြီးအောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟ ..
ဒီကပြီးခဲ့တဲ့ မုံရွာကွန်ပျူတာ ပြပွဲကတော့ ဖွင့်ပွဲမှာကို လော်ကြီးနဲ့ဖွင့်တာပဲ . ICT ရှိုးပါဆို ..တီဗွိတွေ ရေခဲသေတ္တာတွေ ရောင်းလားလာမေးတဲ့သူတွေလဲရှိတယ်..
မဆိုးတော့မဆိုးပါဘူး မုံရွာကလူတော်တော်များများလဲ စိတ်၀င်စားကြပါတယ်..
ကောင်းပါတယ် အစကတော့ ဒီလိုပဲစရမှာပေါ့။